हरिहरको हट्यो डर ? « Mazzako Online
हरिहरको हट्यो डर ?
ज्योतिष तथा नायक हरिहर अधिकारी अहिले तेलेगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को नेपाली रिमेकको तयारीमा छन् । चलचित्र ‘शुभ लभ’ बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गरेका उनलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा पर्‍यो । उनको फिल्म फ्लप भयो । उनी प्रोफेसनले एक ज्योतिष हुन् ।
उनी फिल्ममा लागे पछि उनको पेशामा असर पर्ने टिप्पणी गर्ने धेरै थिए । अझ ज्योतिषले बनाएको फिल्म नै फ्लप भए पछि अब उनको कुरामा कसैले विश्वास नगर्ने टिप्पणी पनि भए । यस्ता टिप्पणीले हरिहर डराएका पनि थिए । तर, फिल्म फ्लप भए पछि पनि उनको ब्यवसायमा कुनै असर नपरे पछि उनको डर हटेको छ । पेसा र चलचित्रको काम फरक भएको मान्छेले बुझे पछि अब उनी ढुक्क छन् । फिल्म हेरेर टिप्पणी गर्ने र चिना देखाउने जमात फरक भएकाले फिल्म फ्लप भए पनि उनको व्यवसायमा कुनै असर छैन ।
हिट फिल्मको नेपाली रिमेकमा प्रस्तुत हुन लागेका हरिहरलाई आफ्नो फिल्मी करियर उकास्ने सोच पक्कै होला । तर, शो फिल्म बाट पनि सोचे जस्तो सफलता नपाए पनि उनलाई केही डर छैन होला । किनकी उनको व्यवसायमा फिल्मले केही असर नपार्नेमा उनी ढुक्क छन् ।